Immanuel ဘုရားသခင် - ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-04 > ငါတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိတော်မူစေသတည်း
ယခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင်သခင်ယေရှု၏လူ့ဇာတိခံယူချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်သည်လူသားဖွားမြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့လူသားဖြစ်လာခဲ့သည်၊ သို့သော်အပြစ်မပါဘဲ သူသည်ဘုရားသခင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းတစ် ဦး တည်းသောစုံလင်သော၊ ဘုရားသခင်သာမန်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူ၏မြေကြီးအသက်တာတွင်ခမည်းတော်အပေါ်လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုအား ထား၍ အလိုတော်အတိုင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုနှင့်သူ၏ခမည်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အောင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမကြုံတွေ့သောနည်းတစ်နည်းဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ပထမဆုံးအာဒံသည်ဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာစွာနေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ထံမိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်ထားသောလွတ်လပ်မှု၊ ပထမလူသား၏အပြစ်ကသူ၏ဖန်ဆင်းရှင်၊ ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေသည်။ ဒါဟာလူသားအားလုံးအတွက်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။
ယေရှုသည်စာတန်၏ကျွန်ဘဝမှကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနုတ်ရန်မြေကြီးပေါ်ကြွလာခြင်းဖြင့်ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေသည်။ လူသားများကိုသေခြင်းမှမလွတ်မြောက်စေရန်သူနှင့်မည်သူမျှမတားဆီးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ငါတို့အတွက်ဘုရားသခင့်နှင့်လူ့အသက်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အပ်နှံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုအပြစ်ဖြေလွှတ်။ ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံကြရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုသဘောတူပါကသခင်ယေရှုကိုသဘောတူပါကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်ုပ်တို့ထံမှဖုံးကွယ်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်အသစ်ကိုယေရှုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်အထူးပင်တေကုတ္တေပွဲတော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်သည်ယုံကြည်သူများအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှအခန်းငယ်အနည်းငယ်ဖြင့်ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြလိုသည်။
«Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch» (Johannes 14,16-20) ။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင်နှင့်တလုံးတ ၀ တည်းရှိရန်ခွင့်ပြုထားသည်ဟူသောအချက်သည်လူ့စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤစကားများပြောသောယေရှုနှင့်သဘောတူသည်ဆိုသည့်မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံကြုံတွေ့ရပါသည်။ ငါတို့အတွင်း၌နေသောဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဤဘုန်းအသရေကိုငါတို့အားပြသတော်မူသည်။ ဤအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်သူတိုင်းသည်သူ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဤအံ့ဖွယ်အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးမားလှသဖြင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝစေလိုသည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်သင့်အားနေရာချထားပြီးသောအခါသူသည်သင့်အားလမ်းခရီးကိုပြသသည်။ သင်၌လည်းပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်း၊ ယေရှုသည်ခမည်းတော်၏အလိုတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုလုပ်သကဲ့သို့သင်သည်ယေရှု မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ယခုImမာနွေလသည်“ ငါတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်” ကိုသင်ယခုတွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ ယေရှုအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုထာဝရအသက်ရရန်သင်အားဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင့်အားယေရှုလုပ်ဆောင်စေပါ။ သူသည်ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ သူနှင့်အတူထာဝရအတူနေထိုင်ခွင့်ရလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကဤယုံကြည်ချက်သည်“ ယုံကြည်သောသူ၌ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည်ဖြစ်တတ်သည်”